ज्ञानप्राप्तिको बाटो - तिब्बती बुद्धधर्म — Study Buddhism
Study Buddhism › तिब्बती बुद्धधर्म › ज्ञानप्राप्तिको बाटो
तिब्बती बुद्धधर्ममा आत्म परिवर्तनका लागि एक स्पष्ट, व्यवस्थित, र क्रमिक बाटो अपनाइन्छ, जसलाई लाम–रिम (मार्गक्रम) भनिन्छ। लाम–रिमले हामीलाई आफ्नो वर्तमान परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दै बुद्धत्व प्राप्तिसम्म कसरी पुग्ने भन्ने ज्ञान दिन्छ।
कर्म र पुनर्जन्म
प्रेम र करुणा
मार्गक्रमको परिचय डा. अलेक्जेन्डर बर्जिन मार्गको क्रमिक पद्धति (लाम–रिम) ले उन्नत पुनर्जन्म, निर्वाण र बुद्धत्वतर्फ लैजान्छ। तिनलाई यही जीवनकाललाई सुधार गर्नका लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।
सबै भाग हेर्नुहोस्
यथार्थः बौद्धमार्ग र यसको लक्ष्यको आधार डा. अलेक्जेन्डर बर्जिन बौद्धमार्गको आधारभूत शिक्षालाई परम पूजनीय दलाई लामाद्वारा रचित चार पंक्तिको वन्दनाले सटीक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसको विस्तृत चर्चा यहाँ गरिएको छ।
चार आर्य सत्यबाट तीन रत्नतर्फ
पहिलो आर्यसत्य ः यथार्थ दुःख
आफ्ना सीमित क्षमतायुक्त शरीर र मनका कारण हामी दुःखहरूमा जेलिइरहन्छौं, हामी सबैको जीवनको यथार्थ दुःख यही हो।
हाम्रो दुःखका यथार्थ कारणहरू असत्यप्रति विश्वास गर्नु, त्यो कोरा कल्पनामात्र हो भन्ने बोध नहुनु तथा त्यसका कारण उत्पन्न हुने क्लेश र कर्महरू हुन्।
कर्म भन्नाले त्यस्तो मानसिक संघटन बुझिन्छ जसका कारण हामी आफ्ना मनोभावमा असन्तुलन, स्व–केन्द्रित व्यवहार, र जीवनप्रति अस्पष्ट दृष्टि राख्दै एकखालको आचरण गर्ने, बोल्ने, वा सोच्ने काम गरिरहेका हुन्छौं। हाम्रो यस्तो बाध्यकारी व्यवहार क्रोध वा कुनैपनि कुरा पूर्ण (पर्फेक्ट) हुनुपर्ने सोचका कारण पनि हुन सक्छ। जे होस्, यसले त्यस्तो बानीको निर्माण गर्दै जान्छ जसबाट हामी असन्तुष्ट र बेखुशी हुँदै जान्छौं। यसैले हामीलाई कुनै न कुनै जीवको रूपमा फेरी फेरी जन्माउँछ जहाँ हामी त्यही बानीबाट प्रेरित भई त्यस्तै व्यवहार पुनः पुनः दोहोर्याइराख्न पाउँछौं। यो चक्रका रूपमा चलिरहन्छ र तबसम्म रहन्छ जबसम्म हामी यसलाई तोडेर निर्वाण प्राप्त गर्दैनौं।
व्यक्तिको भूत तथा भविष्यको जन्मको निरन्तरता बुद्धधर्ममा बताइएजस्तै चित्तगत, कर्मगत र व्यवहारगत कारण र प्रभावहरूले गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको निश्चय।यो दृष्टिले बुद्धधर्ममा पुनर्जन्मको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
करुणा भनेको सबै जीव आफ्ना समस्या र दुःखहरूबाट तथा तिनका कारणहरूबाट पनि मुक्त होऊन् भन्ने कामना हो। त्यही भावना हामी आफ्ना लागि पनि अनुभव गर्छौं र बुझ्छौं कि सबै समान छन् र सबै खुशी रहन चाहन्छन्, कोही पनि दुःखी हुन चाहँदैनन। यस्तो बोधले करुणाको प्रादुर्भाव हुन्छ। तर अरु सबैका समस्याको समाधान होस् भन्ने कामना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। हामीले तिनलाई समस्याबाट मुक्त गर्न सक्षम होऔं भन्ने भावना राख्नु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसो गर्ने जिम्मेवारीको बोध र आफैं बुद्ध बन्ने आकांक्षाको विकास गर्नुपर्छ। तबमात्र हामी सबैलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन्छौं। अरुलाई पनि सकेसम्म सहयोग गर्दै हामी बुद्धत्वप्राप्तिको यात्रामा अग्रसर हुन्छौं।
समाधिको अभ्यासले हाम्रो चित्तलाई खुला, प्रेमपूर्ण, र समझदारीको रचनात्मक अवस्थामा स्थित राख्न मद्दत गर्छ। अरुको कुरा राम्ररी सुन्न र उनीहरूलाई सहयोग गर्न यसले मद्दत गर्छ। समाधिको विकासका लागि हाम्रो चित्तलाई शान्त राख्नु, यताउता धेरै भड्किन नदिनु र आलस्यबाट बच्नु आवश्यक हुन्छ। यो कुरा होसपूर्ण जागरुकता र आत्मसंयमबाट सम्भव हुन्छ। होसपूर्ण जागरुकतामा हामी आफ्नो अवस्थाप्रति सचेत भएर बस्छौं र साथै मनको नियन्त्रण पनि गुम्न दिँदैनौं। होसको अभ्यासबाट हामीले मनको नियन्त्रण गुम्न लागेको थाहा पाइहाल्छौं। आत्मसंयमको अभ्यासबाट आफ्नो होस र मनलाई पूर्ववत फेरी स्थापित गर्छौं। बारम्बारको ध्यानअभ्यास र निष्ठापूर्वक प्रयासमार्फत हामीले आफ्नो मनको अवस्था तथा यसबाट आफू र अरुमाथि पर्ने प्रभाव जान्न सक्छौं, र होसपूर्ण जागरुकता तथा आत्मसंयमको विकास गर्न सक्छौं।
धारणागत विचारका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। ध्यानसाधना र दैनिक जीवनका लागि कुनै उपयोगी हुन्छन् भने कुनै हानिकारक हुन्छन्।
जीवन जगतका यथार्थप्रति भ्रम भएका कारण हामी स्वयंलाई र अरुलाई पनि मिथ्या कुराहरू बताइरहेका हुन्छौं। उदाहरणका लागि, हामी सोच्न सक्छौं कि जीवनमा समस्याहरू आफै खडा हुन्छन् र त्यसमा हामीले राख्ने दृष्टिकोण वा गर्ने व्यवहारको कुनै भूमिका हुँदैन। तर जब हामी शून्यताको अर्थ बुझ्छौं, हाम्रो दृष्टि बदलिन्छ। कुनै पनि चीजको अस्तित्व हाम्रो भ्रमपूर्ण दृष्टिले बुझेजस्तो तरीकाको हुँदैन। हाम्रा समस्याहरू अनेक प्रकारका कारणहरूको आपसी क्रियाबाट उत्पन्न हुन्छन् र ती पनि परिवर्तनशील छन् भन्ने बोध भएपछि हामी त्यसबाट मुक्त हुने सार्थक उपाय अपनाउन सक्छौं।
ट्राफिकमा फसेका बेला शून्यताको अभ्यास
कुनै पनि चीज असम्भव तरिकाले अस्तित्ववान हुँदैन। स्वयं–स्थापित अन्तर्निहित सत्ता यस्तो असम्भव अस्तित्वको उदाहरण हो। यस्तो असम्भव अस्तित्वको पूर्ण विहीनता नै शून्यता हो। मानसिक लेबल (संज्ञा) भनेको चीजहरूको व्यावहारिक अस्तित्वलाई “यस्तो” वा “त्यस्तो” भनेर जान्नु हो।